Buy Mi 6pro . အသစ်​တိုင်းသန့်​ ဘူးပစ္စည်းစုံ No error in ရန်ကုန် (180,000 Ks) on ipivi
Mi 6pro . အသစ်​တိုင်းသန့်​ ဘူးပစ္စည်းစုံ No error
09781253532 လိူင်​သာယာ .
ကြည့်သူအရေအတွက်: 229 (+ 1 )
အမည်:Mi 6pro . အသစ်​တိုင်းသန့်​ ဘူးပစ္စည်းစုံ No error
ဈေးနှုန်း: 180,000 Ks